चाणक्य नीति अनुसार किन जरुरी छ नुहाउनु ? – साइन्स इन्फोटेक
अप्रील 9, 2018 साइन्स इन्फोटेक3Comments चाणक्य, चाणक्य नीति
चाणक्य नीति अनुसार किन जरुरी छ नुहाउनु ? चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । उनी कुटिल रणनीतिकार समेत थिए । उनले आफ्नो कुटनीतिको बलले एक सामान्य बालक चन्द्रगुप्तलाई विशाल भारतको सम्राट बनाइदिए । उनका भनाईहरु आज पनि सर्वत्र चर्चा हुने गर्दछ ।
← चाणक्य नीति अनुसार ४ काम सकिएपछि नुहाउनु उत्तम
3 thoughts on “चाणक्य नीति अनुसार किन जरुरी छ नुहाउनु ?”
Pingback: भुलेर पनि यी ४ काम कहिल्यै अधुरो छोड्नु हुँदैन, नत्र जिवनभरी पछुताउनु पर्छ